Xarun lagu Xanaaneynayo Caruurta darbi Jiifka oo laga hirgeliyey Muqdisho.[Daawomasawirada]
October 22, 2012 - Written by
Muqdisho:-Sabtidii oo ku beegnayd 19/10/012, Magaalada Muqdisho ee Caasida Dalka waxaa laga furey xarun lagu xanaaneynayo caruurta darbi Jiifka ee ku dacdareysan Suuqyada, Qashin gubka iyo Laamiyada, waxaana iska kaashadey hirgelinta xaruntan Hay’add maxaliya oo lagu magacaabo Hay’ada horumarinta Bulshada iyo samafayaal reer Sacuudiya. Xaflada furitaanka ee Xaruntan waxaa ka soo qeyb galey Marti sharaf badan oo isugu jira Mas’uuliyiin ka socota Dowlada, hay’ado Caalamiya iyo kuwa Maxaliya iyo sidoo kale bahda Saxaafada oo isugu jira kuwa Caalamiya iyo gudaha.
Furitaanka Xafadala Mas’uuliyiintii kale duwaneyd ee ka soo qeyb gashey waxey ka yidhaahdeen hadalo u badnaa bogaadin iyo dhiiri gelin iyo sidoo kale iney qeybtooda ka qaadanayaa horumarinta xaruntan iyo wax u qabadka ubadka dacdareysan ee looga faa’iideynayo. Xilligan xarunta waxaa lagu furey 80 ilmo oo wiilaal ah waxeyna ka kooban tahey qeybta hurdada iyo waxbarashada, waxey sidoo kale ku leeyihiin cunno fiican sadexda wakhti.
Waxaa goobta heegan ku ah Maamul iyo macalimiin u taagan wax barida iyo dhaqan celin loo sameynayo caruurta xarunta ku xareysan. Inta badan caruurta xaruntan ku xareysan oo laga soo aruuriyey goobaha qashin qubka iyo suuqyada waxey u badnaayeen kuwa caba koolada iyo daraagiska qeybahooda kale waxaana laga dheehan karey daruuf xoogan oo dhan walba oo ka muuqatey.
Waxaa lagu wadaa xaruntan iney wax ka badasho nolasha, caafimaadka iyo garaadkooda aqooneed caruurtan lagu xareeyay ee lagu xanaaneynayo, waxaa sidoo kale lagu wadaa tiro marba marka danbeysa iney sii korodho. Xaruntan waxey noqoneysaa tii ugu horeysay ee rasmiya ee laga hirgeliyo Magaalada Muqdisho, waxeyna Mas’uuliyiintii kale duwaneyd ee goobta ka Hadley ku taliyeen in la hor mariyo cid walba oo gacan ka geysan kartana baaq ayey u jeediyeen dal iyo dibadba.